Abantu abaningi namuhla niqhubeke mayelana Awakening of Komuntu, kuvulwa amathuba esicashile ingqondo, ekwakheni izwe elisha isakhamuzi yesimanje le planethi ewuMhlaba. Futhi lokhu akukho ngozi, ukuthi kukhona ubufakazi obuphathekayo. uchungechunge Kakade owaziwa izincwadi isibe esoteric orientation kumbhali okungavamile Vadim Zealand. Futhi indalo yakhe entsha "Ezingengcwele Transerfing" bavusa imicabango yabantu ziyangqubuzana abafundi. Empeleni, lokho okuhilelekile kubaluleke kule ncwadi, ake ukubhekana ndawonye.
Vadim Zeland "Ezingengcwele Transerfing": Isandulela
Umbhali uthi isimo oguqukayo emhlabeni, aphuma zemvelo ukuze yabantu kuthinta impilo yabantu, ezingokwenyama nezingokwengqondo. Vadim Zeland igxile yokuthi abanye baye baba "lesihlanu uhlelo" futhi kancane kancane balahlekelwa inkululeko ababeyinikwe futhi ubuntu, njengoba unembeza wabo kuba esilufifi ngaphezulu.
Incwadi "Ezingengcwele Transerfing" lichaza izizathu zokuthi kungani kwenzeka, futhi inika izincomo ezithile uzimisele "vuka".
Umbhali uveza ukuthi, zokulalela iseluleko esinikezwe encwadini, umfundi uyothola umbono ocacile ngokoqobo (njengoba empeleni), ukuzethemba, inkululeko kwangaphakathi kusukela "amaphela" nezinye engqondo "izimuncagazi." Ezilingayo, akunjalo? Kodwa singakwenza kanjani ufinyelelwe? Ikuphi ukuzidela ukuya ukuze siphile uyaqaphela futhi "ngempela"?
"E-Apocrypha Transerfing": izimpikiswano eziyinhloko kusengozini
Ngokusho umbhali, lendoda wanamuhla angeke balahle ithonya umphakathi ezenziwe umuntu, ngisho noma kuyinto ngokukholwa okuhle ukusebenzisa imikhuba esoteric lasendulo. Njengoba ingxenye enkulu Komuntu namandla zilawulwa "uhlelo", idinga ukuba adedelwe ngaphambi kokuhileleka kunoma yiluphi amathuba ukuthuthukiswa enganakile yakhe.
Encwadini "Apokrifichessky Transerfing" amadili nge umthelela ukucabanga ngomzimba womuntu izimuncagazi kanye nezinambuzane ukwazi. imiphumela kwamakhemikhali abantu, bafeza "uhlelo" ngokusebenzisa ezihlukahlukene lwezakhamzimba, izingxenye ze-non-engokwemvelo izinto ukusetshenziswa nsuku zonke kakade okusezingeni eliphezulu ukuze isimo siba ezibucayi. Inguquko zeselula, ngenxa yalokho, kancane kancane ubuthi enemisebe lwesintu, okungabanga bikho kuso umuntu ekhuluma, eqinisweni, yilokho imbangela yezifo eziningi ezingelapheki, inani okuyinto esanda lenyuka kakhulu. Imininingwane Wide Web iyithuluzi elihle ngoba ezinomthelela "uhlelo" ku komuntu. It seluqinile ngakho kwasekuqaleni ngenxa yokuthi bengazi abantu abaningi.
Okwenziwe umuntu ukudla kusiza ukunciphisa amakhono ngokomzimba nangokwengqondo. Vadim Zeland ubhala mayelana nendlela ukubuyisela impilo yakho ngosizo ukudla "bukhoma", inikeza zokupheka "baphile" ukudla ezihlukahlukene ezenziwe imikhiqizo yemvelo.
Lezi kanye nezinye eziningi ezimangalisayo, futhi yini, izinto ezithakazelisayo kakhulu silula echazwe encwadini "Ezingengcwele Transerfing". Audiobook iyatholakala ezitolo intanethi amaningi, kodwa nokho, njengoba umlobi ngokwakhe uthi, uma unquma ukufunda lencwadi, ngoba bezibona egcwele ulwazi olunikeziwe Kungcono ukuthenga incwadi.
"Ukunxusa Daniila Zatochnika": isifinyezo, ukuhlaziywa kanye nencazelo
Memory wire lwemigexo